ukubuyekezwa: Dec. 27 2017 | 2 min ukufunda
Zingaphi amaxesha oku kwenzeka kuwe? Umhlobo wakho kwaye simi umvalo ubone ibhinqa enomtsalane. Nina ukundibiza dibs uze wasilela ukuza umgca. Uyakwazi ukuba umfazi ufuna ukuva umgca kodwa ke, kakuhle, ukuba ulwimi libotshelelwe. Endaweni yokuba nako neyophahla mfazi ojika kokuba ndabanda ngumhlobo wakho, "Cat wafumana ulwimi lwakho?"
Wonke umntu uye isabelo sabo kuzityumza esikolweni. Ebomini bakho apho nayo le ntombazana ukuba ubuya ufuna ukwenza lukhulu kangaka - Mkhupheleni phandle, Yiya kwimuvi, ngezandla yaye ngokubanzi nexesha kakhulu. Kodwa akanakuze ayilungise isibindi - mhlawumbi ubucinga ngokwaneleyo ezilungileyo okanye ubuya kusoloko ubone umfazi iphupha lakho iingalo yesikolo Adonis. Kwaye cwaka wancama, Sasicinga ngaye nokuncwina.
Ngokupheleleyo ukutshintsha isihloko - into oyaziyo iimbovane? Wena ngokwenene kunikwa ezi izinambuzane ezincinane kwaukucinga, ukhe wa? Into yokuqala ethi qatha engqondweni yakho xa ubona thanga iimbovane kukuba ukunqgubanisa kubo.
Kodwa ngaba uyazi ukuba iimbovane ikwasifundisa zizifundo ezibalulekileyo neyophahla umfazi? Makhe sibone indlela.
isenzo #1 - Musa ukulinda izinto ukuba zenzeke
Iimbovane rhoqo etyhalela; ba soloko esenza into. Inkoliso yamadoda nabafazi uthando abazithathela ulawulo. Ngoko ke, ukuba uyaqhubeka belindele umfazi iphupha lakho ukuza kuni kwaye iphakamisa uthando, ngoko libala uninzi lwabasetyhini ungathanda ukuba. Ukuba ufuna umgangatho umfazi wakho ukuhamba ngokulula phezulu kuye bathi ukuba ufuna wakhe. Kwimeko esivule meko imbi iya kuthi hayi.
isenzo #2 - Sukuncama
Iimbovane musani ukuyeka - bayazi indawo yabo baze kufika nto phakathi awokuwa iziphazamiso. Wena ke ukulahlwa wakho kuqala? Ungaxhalabi; akukho nto isiphelo sobomi. Zama kwakhona ... Cinga ngabo amaqhawe kwimovie ekugqibeleni ikwazile woo abafazi babo naxa ziye zabukulwa ixesha yaye kwakhona.
isenzo #3 - Makajoliswe
Iimbovane njongo kujoliswe - bayazi ukuba singasindisi ngenxa amaxesha ezingqwabalala kokuba kubopheleleka ukuba sife. Ukuba ungathanda umfazi ubuya ufuna umgangatho ungenisa emva kwakhe. Nje ukuqinisekisa ukuba utshintshe imigca bakho kunye nesimbo.
isenzo #4 - Gcina imigca zakho
Iimbovane adle abanye ukutya kwabo baza ndisindise inxenye. Njengokuba kude njengoko umfazi ochaphazelekayo akufunekanga bayikhuphe yonke ammos yakho Yiya enye. Yiba funny; baveze original size ekugqibeleni iya kuba ngabakho.
Bengaphilanga kwakhona ukuba iimbovane zingabalulekanga, ungu? Ewe, bafundisa izifundo ezininzi ezibalulekileyo ebomini, kuquka yeyona likumgangatho yokuba nako ukutsala umfazi ngokuthi ukutyibilika yakhe. Ukuba lo mfazi ufuna umgangatho ngokulula azenze imbovane apha. Ngoko buyela kwaye undixelele ukuba nangoku bayancwina njengoko umfazi iphupha yakho wasisa kude ngomnye Adonis.